रामकुमारीको खेदो र राष्ट्रिय गानको खोक्रो खोल
पामेल उपाध्याय बुधबार, बैशाख ३ २०७७
अहिले देशमा रामकुमारी झाक्री ले उठान गरेको बिषयलाई लिएर केही थान लाल स्वयम् सेवकहरु उनको आलोचनामा ब्यस्त छन्। सरकारको के त्यस्तो कमजोरीको उठान गरेकी थिइन् र रक्षार्थ झाक्रीको आलोचना गर्नु परेको छ । कारण सजिलो छ, सत्तापक्षले गरेको कमजोरी लुकाउनु छ भने प्रतिपक्षीको कमजोरी केलाउने गरिन्छ । यो कुरा प्रजातन्त्र पुनःस््थापना पश्चात् अघोषित कानुनी ब्यवस्था जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
यस बिषयमा प्रतिवाद गर्नु भनेको साहारा मरुभूमीमा सुन्दरता खोज्नु जत्तिकै हो । वा त्यो संसारकै दरिद्र मानसिकता भएको मानिस हो । यस्को पनि कारण छ, कम्यूनिष्टहरु आलोचनालाई कदापी स्वीकार्दैनन् बरु, भौतिक कार्वाहीमा उत्रन्छन् । आलोचना सहने सामथ्र्य हुँदैन। मानवता समाप्त होस् तर कम्यूनिष्ट सिद्धान्त जीवित रहनु पर्छ भन्ने बेतुकको दर्शन बोकी हिड्नाले डिप्रेसनको शिकार भएका कयौं उदाहरणहरु पाइन्छन् ।
ल ठीक छ ! प्रतिपक्षले त द्वेस को आधारबाट आलोचना गर्छ रे तर, आफ्नै पार्टीको मान्छेद्वारा गरिएको सुझावलाई पनि मान्न तैयार छैनन् लाल स्वयम् सेवकहरु । किनकी बर्तमान सरकार भनेको एउटा यस्तो अलौकिक शक्ति हो जसको नराम्रा पक्षको आलोचना गर्नु वा उचित सल्लाह सुझाव दिनु संस्कार बिहीन मनुष्य हो । एकताका डा. सुन्दरमणी दिक्षितलाई पनि संस्कार बिहीन मनुष्यमा दर्ज गराएका थिए । मानौं देशमा अहिले राम राज्य चलिरहेको छ । नत्र गोकुल बास्कोटाले राजिनामा दिनै पर्दैन थियो ।
ज्वरोलाई कारण देखाएर रोग लुकाउने मान्छेहरुलाई बेबकुफको पगरी गुथिदिए हुन्छ। यस्ता मान्छेहरु आफुलाई, रातो बत्ती बलेको बेला दायाँ बायाँ हेरेर बाटो काट्ने चलाख सम्झिन्छन्। तर यिनिहरु धूर्त र स्याल प्रवृतीका हुन्छन्। यी बेबकुफहरुलाई यो थाहा हुँदैन कि छेउछाउको घर झ्याल वा छतबाट कसैले हेरिरहेको छ कि चिहाईरहेको पो छ कि वा देखिरहेको छ कि भन्ने भेउसम्म पाउदैनन्।
अब एक छिन प्रसङ्ग बदलौं,
एकातिर कुनै आध्यात्मिक दर्शन र शास्त्रीय पद्धती नभए पनि भावनामा बगेर राष्ट्रिय गान र तालीले कुन उचाई लियो वा एकताको संदेशले कस्तो आत्मवल बढायो त्यो त स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई सोध्दा थाहा भैहाल्छ। ब्याक्तिगत मनोकांक्षा पूरा गर्ने र दलको बिज्ञापन गर्ने अवसरको रुपमा बजाईएकोले राष्ट्रिय गान माथीकै अपमान थियो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ। तर, नयाँ भन्दा पुरानो राष्ट्रिय गान ‘श्रीमान गम्भीर नेपाली’ धेरै बजेको चाहिँ सुन्न पाईयो। यस्ले गणतन्त्रप्रतिकोे वितृष्णा उजागर गर्दछ।
अर्कोतिर, दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर पेट पाल्ने जनताहरुलाई उचित ब्यबस्थापन गर्न सकिएन भने लकडाउन जति बढाए पनि साचो अर्थमा त्यो लकडाउन नभएर हामीले फेर्ने सासमा एउटा पिडाबोध हुनेछ। कोरोनाको त्रासदीले मान्छेको भोको पेटलाई रोक्न सक्तैन। बाच्नको निम्ति मरणासन्न हुन्जेलसम्म दश हात र पाउ खियाएर संघर्ष गरिरहेका निमुखा वर्गहरुलाई लक डाउनले छेक्न सक्तैन। भावनाले संसार चल्ने भए सबैभन्दा शान्त भोको पेट नै हुने थियो।
यस्तो बेला राष्ट्रिय गान, एकताको संदेश र आत्मवलको साधक नबनेर बिरहमा गाईने अरुणा लामा र नारायण गोपालका गीतमा परिणत हुने चाहिँ निश्चित छ। आशा गरौं यस्तो कहिल्यैं नहोस्।
नमस्कार, सबैको जयहोस्